Kutheni izixhobo zokuSebenza ngokuBambisana ziyimfuneko kwiQela lakho ukuze uphumelele | Martech Zone
Kutheni izixhobo zokuSebenza ngokuBambisana ziyimfuneko kwiQela lakho ukuze uphumelele
NgoLwesibini, Aprili 25, 2017 NgoLwesithathu, Aprili 26, 2017 Douglas Karr
IHightail ikhuphe iziphumo zayo zokuqala Imeko yoPhando lweNtsebenziswano yokuBumba. Uphononongo lujolise kwindlela ukuthengisa kunye namaqela ayilayo asebenzisana ngayo ukuhambisa iintaba zomxholo wokuqala ofunekayo ukuqhuba amaphulo, ukuhambisa iziphumo zeshishini kunye nokunyusa ukuthengisa kunye nengeniso.
Ukunqongophala kwezixhobo kunye noKwanda kweMfuno kuyenzakalisa abaDali
Ngokuphuma komxholo kuwo wonke umzi mveliso, imfuno yokuqulatha izinto ezizodwa, ezinyanzelisayo, ezifundisayo kunye nomgangatho ophezulu zizinto ezikhoyo kule mihla. Ukukhangela ii-algorithms kuyayifuna, iinethiwekhi zentlalo ziyachuma kuyo, kwaye amashishini azuza kuyo. Nangona kunjalo, njengoko iimfuno zikhula, uyilo luyacolwa.
Ngaphezulu kwe-1,000 XNUMX yentengiso kunye neengcali zokuyila eziphendulileyo, ezibonelela ngegalelo lokuba inkqubo yokusebenzisana kuyilo enoxinzelelo kakhulu, inkcitho enkulu kwaye, iyangxenga umgangatho womxholo woyilo. Inkqubo engasebenziyo, eyaphukileyo yentsebenziswano yoyilo inoxinzelelo, eyonakalisa isimilo seqela kunye nefuthe elibi kwimveliso yoyilo.
Umxholo okwinqanaba eliphezulu ukukhulisa ukukhula. Amaqela entengiso acelwe umngeni wokuhlangabezana neemfuno ezandisiweyo kwaye avelise umxholo wokuqala ongowakhe, ofanelekileyo, odibana nezikhokelo zodidi kunye nomgangatho ophezulu, kwaye uninzi kufuneka lwenze ngezixhobo ezifanayo. Le ngxaki ikhula ngokungxamisekileyo kwaye awona maqela aphambili afuna iindlela ezintsha zokusebenzisana- ukusuka ekukhulelweni ukuya ekugqityweni- ukuze kuhlangatyezwane nale mfuno ikhulayo. Umphathi weHightail, uRanjith Kumaran
I-87% yezinto eziyilayo ziyavuma ukuba kubalulekile ukuba umbutho wabo ugcine umgangatho womxholo ngelixa kulula ukukhulisa izixhobo ezikhoyo ukuhlangabezana nemfuno yomxholo.
Iipesenti ezingama-77 zokuyila ziyavuma ukuba uphononongo loyilo kunye nenkqubo yokuvunywa inoxinzelelo
I-53% yezinto zokuyila zithi uxinzelelo olonyukayo sisiphumo sabantu abaninzi ababandakanyekayo kuphononongo lomxholo kunye nokuvunywa
Iipesenti ezingama-54 zabenzi bokuyila ziyavuma ukuba amaqela abo entengiso akachaphazeleki, ngenxa yoxinzelelo
Iipesenti ezingama-55 zoyilo zixhalabile malunga nokuhlangabezana nemfuno ekhulayo yomxholo ongaphezulu
Ngaphezulu kwe-50% yezinto zokuyila zithi zonke iinxalenye zenkqubo yazo yophuhliso ziyingxaki
Ayisiyo "nje" ingxaki yokuthengisa, iyonakalisa ishishini liphela
Inkqubo eyaphukileyo ibiza imali yokwenyani, kwaye ukulibaziseka kubotshelelwe ekukhuleni kwengeniso kancinci:
62% bakholelwa Ukuchitha ixesha nemali xa kulungiswa ukungaqondani kunye nokunxibelelana okungafanelekanga okuvela kwinkqubo eyaphukileyo.
Iipesenti ezingama-48 bathi ezabo Ukukhula kwemali kwenzekile ngenxa yokuba bengakwazi ukuhambisa umxholo womgangatho ngesantya esaneleyo;
I-58% ithi ukwanda kwentengiso kunye nengeniso sesona sibonelelo sikhulu seshishini ekujonganeni nemiceli mngeni kwinkqubo yokusebenzisana yoyilo
Ama-63% athi anjalo Ayikwazi ukuvavanya uyilo olwahlukileyo kangangoko bafuna, ukunciphisa ifuthe lotyalomali lwabo lweendaba
Amaqela akhangela indlela engcono yokusebenzisana
Nangona ukuthengisa kunye namaqela ayilayo anokukhalaza, iipesenti ezingama-85 zithi ukusebenzisana kunye nentsebenziswano- xa kulungile-inokuba yenye yezona ndawo zibalaseleyo kwimisebenzi yabo. Ngelixa uphononongo luveze ukuba i-36% ikholelwa ekubeni akukho sisombululo setekhnoloji sokulungisa iingxaki abajongana nazo ngentsebenziswano yokuyila, ayiyonyani leyo.
Ngokwenyani sisebenzisa I-Hightail kunye nabathengi bethu ukunceda ukuphonononga imizobo, oopopayi, iipodcast, kunye nevidiyo kunye nabathengi bethu. Iqonga libonelela ngonxibelelwano olucocekileyo lokucinga kweqela, ulawulo lweeasethi, ukubonakala, ingxelo kunye nokuvunywa.
tags: ukulawula impahlaimvume yokuyilaukusebenzisana koyiloingxelo yobuchuleinkqubo yoyiloamaqela obuchuleingcingaIziphumo zovavanyoiqela
Iingozi ezintathu zoThengiso oluHlanganisiweyo kunye nendlela yokuziPhepha
I-Semrush Yongeza Isixhobo sokuKhasa indawo yakho kwaye ufumane imiba ye-HTTPS
Epreli 30, 2017 ngo-12: 52 PM
Inqaku elimnandi uDoug!
Nasi esinye isizathu sokudinga izixhobo zokusebenzisana- banokuphucula imveliso yabo ngokusebenza ekhaya ubuncinci iintsuku ezimbalwa ngeveki.
Jonga, inkqubo yokuyila ifuna ixesha elithe cwaka lokuzimela ukuze ube nobuchule. Iifama zeCubicle ziyonakalisile loo ndawo yokusebenza, ubukhulu becala. Kunzima kakhulu ukungena kuMmandla kwaye uhlale apho ixesha elaneleyo ukuze ufumane iziphumo ngaphandle kokuphazamiseka rhoqo.
Emva koko kukho ukuhamba. Bendihlala ndichitha iiyure ezi-3 ngemini ndiqhuba ndibuyela emsebenzini wam eSilicon Valley. Ezo yure azimenzelanga umqeshi wam okanye mna nakanye-bekulixesha elilahlekileyo kwaye longeze uxinzelelo.
Khawufane ucinge ngokufumana kwakhona ezo yure zintathu kwaneentsuku ezimbini ngeveki- iiyure ezi-3 ngaphezulu zemveliso. Kwaye, mhlawumbi ngakumbi kwimveliso kwiofisi yasekhaya ethe cwaka.
Kodwa, isebenza kuphela ukuba unako ukusebenzisana kwaye unganqunyulwa.
Le yenye yezinto endidlula kuzo xa ndichaza inkqubo yemveliso endiyisebenzisela owam umsebenzi. NjengeSolopreneur, ndakhe ishishini elikwi-Intanethi elifumana iindwendwe ezizizigidi ezingama-4.5 ngonyaka kwaye lenze ingeniso entle. Akukho ndlela ndinokwenza ngayo ngaphandle kolu hlobo lokonyusa imveliso.
Ndichaza inkqubo yam kwikhosi yasimahla ekwi-Intanethi efumaneka apha:
Ijolise ikakhulu kwiimfuno zokuyila, ke ndiyathemba ukuba abafundi bakho banokuzuza.
Ukujonga phambili kwisithuba sakho esikhulu esilandelayo.